जम्मु–कस्मिरमा लस्कार–इ–ताइबा समूहका कमाण्डरसहित दुई आतंकवादी मारिए:: Naya Nepal
जम्मु–कस्मिरमा लस्कार–इ–ताइबा समूहका कमाण्डरसहित दुई आतंकवादी मारिए
जम्मु–कस्मिरमा सोमबार भारतीय सेनाको कारवाहीमा आतंकवादी समूह लस्कार–इ–ताइबा समूहका एक कमाण्डरसहित दुई आतंकवादी मारिएका छन्।
कस्मिरको रामबाग क्षेत्रमा भारतीय सेनाको कारवाहीमा लस्कार–इ–ताइबा समूहका कमाण्डर सैफुलाह मारिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
जम्मु–कस्मिरका प्रहरीले दुई आतंकवादी मारिएको भन्दै ट्वीट गरेको छ। यी आतंकवादीहरु नाउगाम आक्रमणका योजनाकार भएको बताइएको छ। हालै त्यस आक्रमणमा दुई भारतीय सेनाको ज्यान गएको थियो।
गत सेप्टेम्बर २४ मा चादोरा भन्ने क्षेत्रमा पनि यी आतंकवादीले नै आक्रमण गरेको बताइएको छ।
आक्रमणमा मारिएका आतंकवादीहरु मध्ये एकजना स्थानीय आतंकवादी भएको र अर्का पाकिस्तानका नागरिक भएको बताइएको छ।
कोरोना महामारीका कारण अहिले धेरै क्षेत्र प्रभावित छ। झण्डै ६ महीना लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले जनजीवन मात्र कष्टकर भएन, सबै क्षेत्रका क्रियाकलाप प्रभावित बने। बन्दाबन्दीका केही महीना सुस्ताएको संगीत क्षेत्र अहिले भने चलायमान देखिएको छ। दैनिक औसतमा तीनवटा गीतका म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले गीत गाउने कलाकार, म्युजिक भिडिओ निर्देशक, प्रोडक्सन हाउस, रेकर्डिङ सेन्टर, प्राविधिक, म्युजिक भिडिओमा अभिनय गर्ने कलाकारले रोजगारी पाए पनि लगानीकर्ता भने असुरक्षित बनिरहेका छन्। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, नेपालका अध्यक्ष एवं लोक तथा दोहोरी गायक, गीतकार रमेश बिजी भने यसलाई निकै चिन्ताको विषय ठान्छन्। कोरोनाभाइरस महामारीले समग्र लोक तथा दोहोरी गीतमा पारेको प्रभावबारे बिजीसँग हिमालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
अहिले विभिन्न जिल्लाको (राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको) वार्षिक साधारण सभा भइरहेको छ। भौतिक उपस्थितिमा गर्न सम्भव नभएकोले हामीले जूममार्फत गरिरहेका छौं। त्यसैमा व्यस्त छु। र, कोभिड–१९ सहयोग समितिमार्फत दशैंमा घर जान चाहने तर, समस्यामा परेकाहरूलाई पठायौं र नजानेहरू जो समस्यामा परेका छन् उनीहरूको सहजताको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं।
कोरोनाभाइरसले लोक तथा दोहोरी गीतहरूलाई त प्रभाव नपारेको झैं देखिन्छ। के छ अवस्था ?
हो। नयाँ गीतको म्युजिक भिडिओहरू दैनिक दुई देखि तीन वटा सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्टुडियो, गीत गाउने कलाकार, म्युजिक भिडिओ निर्देशक, प्रोडक्सन हाउस, रेकर्डिङ सेन्टर, प्राविधिक, म्युजिक भिडिओमा अभिनय गर्ने कलाकारले नियमित काम पाइरहेका छन्। एउटा गीतको लागि लाखौं खर्च गरिरहेका छन्। यो हेर्दा प्रभाव परेको जस्तो देखिंदैन। तर, हामीले राहत बाँड्दा तिनै लाखौं खर्च गर्ने लगानीकर्ता आएका थिए।
हामीले ६०० कलाकारलाई दाल, चामल वितरण गरेका थियौं। हुन त यो एउटा खालको लत पनि हो। त्यसैले उनीहरू बरु भोकै बस्ने तर, गीत बजारमा ल्याउने सोचले लाखौं खर्च गरेर गीत बजारमा ल्याइरहेका छन्। यो खालको हर्कतले भोलि उनीहरू स्वयं ठूलो समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना छ। अर्को समस्या भने दोहोरी साँझमा गाउने भाइ–बहिनीहरूलाई छ। उनीहरूलाई भने कोरोनाभाइरसले अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ।
लगानी नउठे पनि दुई/चार वटा टिकटक बनाइदिंदा, थौरैले हेरिदिंदा पनि खुशी हुन्छन्। देखाएर हिंड्छन्। त्यस्तो पनि भएन भने आफ्ना परिवार, आफन्तलाई मात्रै देखाएर पनि खुशी हुन्छन्। गीत केही दिनपछि हराएर जाने, लगानी पनि डुब्ने अवस्था छ।
अहिलेको लगानीकर्ताहरूले गरेको खर्च उठिरहेको होला ?
अहिलेको लगानीकर्ताहरू धेरै जस्तो नयाँ कलाकार छन्। जसले आफूलाई प्रयोग गर्ने, अरुले गर्दा मैले किन नगर्ने भन्ने खालका सोच भएका, मन बुझाउनका लागि गर्नेहरू रहेका छन्। विना अर्थको लगानी भइरहेको छ। युट्युब अथवा गुगलले पैसा दिने लोभमा लगानी गरिरहेको पनि पाइन्छ। एकदमै सीमित लगानीकर्ताले बाहेक बाँकीको लगानी बालुवामा पानी खन्याए झैं भइरहेको छ।
त्यसोभए अहिले नबुझेर नै लगानी भइरहेको हो ?
मेरो बुझाइमा अवस्था त्यस्तै छ। तर, हामी कलाकार भनेका सानो कुरामा पनि खुशी हुन सक्छौं। लगानी नउठे पनि दुई/चार वटा टिकटक बनाइदिंदा, थौरैले हेरिदिंदा पनि खुशी हुन्छन्। देखाएर हिंड्छन्। त्यस्तो पनि भएन भने आफ्ना परिवार, आफन्तलाई मात्रै देखाएर पनि खुशी हुन्छन्। गीत केही दिनपछि हराएर जाने, लगानी पनि डुब्ने अवस्था छ।
अहिले फाइदा चाहिं कसलाई भइरहेको छ त ?
लगानीकर्ता बाहेक सबैलाई। स्टुडियोमा गीत गाउने कलाकार, म्युजिक भिडिओ निर्देशक, प्रोडक्सन हाउस, रेकर्डिङ सेन्टर, प्राविधिक, म्युजिक भिडिओमा अभिनय गर्ने कलाकारले रोजगार पाएका छन्, त्यत्ति हो।
यसले त भोलि अप्ठ्यारो अवस्था निम्त्याउला नि ?
एकदम ठूलो समस्या सिर्जना हुने सम्भावना छ। किनभने रहरसँगै पैसा पनि सकिरहेका छन्। हातमा पैसा पनि छैन। जुन पहिचानका लागि कोशिश गरेको हो त्यो पनि प्राप्त नभएपछि त अवश्य पनि मानसिक रूपमा तनाव सिर्जना गराउँछ। त्यसले दुर्घटना पनि गराउन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु। कस्मेटिक जीवन बाँचिरहेकाहरू समस्यामा पर्छन्।
अहिलेको लोक तथा दोहोरी गीतका म्युजिक भिडिओ हेर्दा कोरोनाभाइरसले महामारी फैलाएको छ झैं लाग्दैन नि।
हो, अहिले सार्वजनिक भएको लोक तथा दोहोरी मात्रै नभएर अन्य विधाको म्युजिक भिडिओहरू पनि त्यस्तै देखिन्छ। सहकलाकारको भीड त्यस्तै छ। स्टुडियोमा भीड त्यस्तै छ। ५०/६० जना भेला भएर शुटिङ गरिरहेका छन्। यो राज्यको कमजोरी हो। भीड कम बनाउने हरेक नागरिकको जिम्मेवारी हो।
तीज गीतको म्युजिक भिडिओ मात्रै २०० भन्दा बढी सार्वजनिक भयो। त्यसपछि दैनिक औसतमा तीन वटा गीतको म्युजिक भिडिओहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, अहिले बजारमा गीत आउने र हराउने क्रम बराबर छ।
विशेषगरी कलाकारहरूले त झन् गर्नै नहुने काम हो। तर, खै बुझेको ? यदि कसैले बुझेको छैन अथवा बुझेर पनि अटेर गरिरहेको छ भने त राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो नि। खै गरेको ? हामीले अनुरोध गर्ने हो। गरिरहेका छौं। तर, सुनेका छैनन्। त्यस्ता गतिविधि रोक्न राज्यले अग्रसरता देखाउन सकेको छैन। जसको कारण महामारी थप फैलन सक्ने र सबै भन्दा क्षति कलाकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
अहिलेसम्म कति जना कलाकार कोरोना संक्रमित भएका छन् ?
असुरक्षित काम गरेर संक्रमित भएकाहरूले खुलाउँदैनन्। खुलाएका छैनन्। कलाकार भाइ खेम सेन्चुरीले स्टुडियोबाट संक्रमित भएको स्टाटस लेख्दै सार्वजनिक भए। अर्को राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जापान शाखाको अध्यक्ष सूर्य खड्का संक्रमित भएका छन्। अरु पनि होलान् खुलेका छैनन्। कतिपयले जाँच गरेका छैनन्। यो महामारीलाई एकदम सहज तरिकाले लिएर काम गरिरहेका छन्। यो लापरबाहीले भोलि साँच्चै समस्या ल्याउने खतरा देख्दैछु।
बन्दाबन्दी अवधिदेखि अहिलेसम्म कति लोक तथा दोहोरी गीतको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक भयो ?
तीज गीतको म्युजिक भिडिओ मात्रै २०० भन्दा बढी सार्वजनिक भयो। त्यसपछि दैनिक औसतमा तीन वटा गीतको म्युजिक भिडिओहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। ‘प्रतीक्षाको घडी सकियो, तपाईंलाई नचाउन’ लगायतको स्टेटसहरू लेखेर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। अहिले बजारमा गीत आउने र हराउने क्रम बराबर छ।